'नो शो' विवाह उपहार - उत्तम विचारहरू | बेजिया
विवाह उपहार 'उपस्थिति छैन': उत्तम विचारहरू
सुसाना Godoy | 16/06/2022 16:00 | बोडस
यदि तपाइँ 'नो-शो' विवाह उपहार दिने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाइँ वास्तवमै उपस्थित हुन सक्नुहुन्न, तब हामी तपाइँलाई उत्तम विचारहरूको श्रृंखला दिन्छौं।। बिहेमा जाँदा के दिने भन्ने सोच्दा कहिलेकाहीँ आफैंमा टाउको दुख्ने हुन्छ, उल्टो यसले हामीलाई शंकाको संसार पनि ल्याउँछ। निस्सन्देह हामीले एक उत्तम चयनको लागि रोजेका छौं।
सबै कुरा निर्भर हुनेछ कि तपाइँ जोडी को स्वाद को बारे मा धेरै वा थोरै थाहा छ। किनभने यो सधैं यस्तो बाटो तल गोली मार एक राम्रो विचार हो। तर यदि यो तपाईलाई देखा पर्दैन भने, चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने त्यहाँ छनौट गर्न विचारहरू छन्। यदि म विवाहमा उपस्थित भएन भने मैले के दिनुपर्छ? यो सबैभन्दा धेरै सुनिएको प्रश्नहरू मध्ये एक हो र आज तपाईंसँग यसको विविध जवाफहरू हुनेछन्।
1 विवाह उपहार 'उपस्थिति छैन': अनुभवहरूको बक्स
2 तपाइँको केहि आवश्यक को लागी भुक्तान गर्नुहोस्
3 बोतलहरूको एक व्यक्तिगत प्याक
4 घरमा बिहानको खाजाको आश्चर्य
5 सजावटी विवरण
विवाह उपहार 'उपस्थिति छैन': अनुभवहरूको बक्स
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई पहिल्यै थाहा छ ती बाकसहरू जुन एक अद्वितीय अनुभवमा हराउने पर्यायवाची हुन्। एकातिर त्यहाँ ती छन् जहाँ तपाईं एक रात वा दुई, साथै नाश्ता वा आधा बोर्ड चयन गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, गन्तव्यहरू धेरै फरक हुन सक्छन् र यस बिन्दुमा यो जोडीले कहाँ निर्णय गर्ने हो। होटलको रातको अतिरिक्त, त्यहाँ स्पा अनुभवहरू पनि छन्, उपचारहरू समावेश छन् वा खानाहरूको श्रृंखला र बहु-थीम्ड भ्रमणहरू पनि स्वाद गर्ने क्षमता। त्यहाँ अनन्त विचारहरू छन्, त्यसैले तपाईंले दुलही र दुलहीको स्वादमा अलि फिट हुने एउटा छनौट गर्नुपर्छ। तपाईंले लगानी गर्न लाग्नु भएको पैसाको सम्बन्धमा सन्तुलन बनाउनको लागि, यदि तपाईं विवाहमा जानुभयो भने तपाईंले दिनुहुने आधाको बारेमा सोच्नुहोस्। यो तपाइँलाई एक विचार दिन को लागी हो!
तपाइँको केहि आवश्यक को लागी भुक्तान गर्नुहोस्
जब मित्रता तपाईको पक्षमा बिन्दु हो, तपाई सधैं चाहानुहुन्छ कि उनीहरुले त्यो विशेष दिनमा तपाईको सम्झना गरोस्। त्यसैले होला, दुलही वा दुलहीले किन्नु पर्ने केहि चीजहरूको आधा तिर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, गठबन्धन, गुलदस्ता वा समान चीजहरू। यो पैसा लगानी गर्ने तरिका हो जुन तपाईंले तिनीहरूलाई दिन लाग्नु भएको थियो वा जसको साथ तपाईंले अर्को विवरण किन्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन उनीहरूलाई धेरै आवश्यक छैन। यद्यपि तिनीहरूले हामीलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्, पक्कै पनि यो बोलेर तिनीहरूले यो बुझ्न सक्षम हुनेछन्।
बोतलहरूको एक व्यक्तिगत प्याक
पक्का विवाह पछि, र एक पटक तिनीहरू हनिमूनबाट आइपुगेपछि, तिनीहरूले तपाईंलाई ठूलो दिनको सम्झना गर्न घर आमन्त्रित गर्नेछन्।। त्यसोभए, तिनीहरूलाई वाइन वा कावाको व्यक्तिगत प्याक दिनु भन्दा राम्रो केहि छैन। त्यहाँ ती व्यक्तिहरू छन् जसले केही पेयहरू पनि ल्याउँछन् र पक्कै पनि यो एक उत्तम विवरण हुन सक्छ। यी चश्माहरू पनि उत्कीर्ण गर्न सकिन्छ र बोतलहरूमा विवाहको छविसहितको राम्रो स्टिकर राख्न सकिन्छ। आज त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जसले यसलाई हेरचाह गर्दछ। त्यसोभए साधारण कार्यक्रमहरू मार्फत तपाइँ यसलाई ठूलो जटिलता बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
घरमा बिहानको खाजाको आश्चर्य
सायद यो यस्तो उपहार होइन, तर यो एक राम्रो आश्चर्य हो। अर्को शब्दमा, जब हामी 'गैर-उपस्थिति' विवाह उपहारको बारेमा कुरा गर्छौं, यो विभिन्न कारणले दिन सकिन्छ। कहिलेकाहीं हामी केही अन्य प्रतिबद्धताका कारण जान सक्दैनौं, धेरैमा आर्थिक समस्याहरूको कारणले। त्यसैले, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बजेट समायोजन गर्नुपर्छ। त्यसैले उनीहरूलाई ती व्यक्तिगत ब्रेकफास्टहरू मध्ये एउटा भाडामा लिएर आश्चर्यचकित गर्नुहोस् जुन उनीहरूले दम्पतीलाई थाहै नदिई घरमा लैजान्छन्, यो राम्रो इशारा हो जसले उनीहरूलाई उत्साहित बनाउँदछ।.
अन्तमा, हामी सबैभन्दा क्लासिक विचारहरूमा पर्न सक्छौं, तर हामीले त्यसको लागि तिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। तपाईं आफ्नो घर सजावट गर्दै हुनुहुन्छ वा होइन, एक सजावटी विवरण सधैं राम्रो विकल्प हुन सक्छ। केही चित्रकारी वा भित्ता घडी, साथै साना बत्तीहरू बेडसाइड टेबलहरूको लागि। प्रवेश क्षेत्रको लागि कोट र्याकहरू पनि एक मूल्यवान विकल्प हो र निस्सन्देह, ट्रेहरू ताकि तिनीहरूले बिहानको खाजा ओछ्यानमा लिन सक्छन्। बिहेमा नजाने के दिनुहुन्छ ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » विवाह उपहार 'उपस्थिति छैन': उत्तम विचारहरू
पुरानो फर्निचरलाई आधुनिकसँग जोड्ने विचार